आवेदकको संख्या बढी भएपछि कान्तिको करार अन्तर्वार्ता स्थगित | | Nepali Health
आवेदकको संख्या बढी भएपछि कान्तिको करार अन्तर्वार्ता स्थगित
२०७३ चैत १० गते ९:०५ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १० चैत । अन्तर्वार्ता लिएर करार पदपूर्ति गर्ने भन्दै २५ दिन अघि सूचना निकालेको कान्ति बाल अस्पतालले अन्तिम समयमा आएर परीक्षाको मोडालिटी परिवर्तन गरेको छ । परिवर्तित प्रणाली अनुसार अव करारमा फारम भरेकाहरुले लिखित परीक्षा समेत दिनु पर्नेछ ।
अस्पतालले अन्तर्वार्ता सुरु हुनु भन्दा एक दिन अघि सूचना निकालेर परीक्षाको मोडालिटी परिवर्तन गरेको हो । ‘मागको तुलनामा आवेदन गर्नेको संख्या निकै बढी भयो । अन्तर्वार्ताले मात्रै छनौट गर्न नसकिने जस्तो देखियो । त्यसैले लिखित पनि गर्नुपर्ने भयो,’ अस्पतालका निर्देशक डा. अजित रायमाझीले भने ।उनले आज बस्ने बोर्डको बैठकले नयाँ परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने बताए ।
यसअघि कान्ति आफैले करारको सूचना निकाले पनि अन्तरबार्ताको जिम्मा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालयले आज देखि अन्तर्वार्ता लिने बताएको थियो । कतिपयले सूचना आफूले निकालेर मन्त्रालयलाई अन्तर्वार्ता लिन लगाउनु कान्ति बोर्ड निरिहता भएको समेत आरोप लगाएका थिए । तर डा रायमाझीले तालुक निकाय भएकोले सहयोग लिएको दावी गरे । उनले अव भने आफैले परीक्षा लिने बताए ।
गत १५ फागुनमा प्रकाशित गरेको सूचनामा कन्सलटेन्ट पेडियाट्रिसियन नवौ तह ४ जना, पेडियाट्रिक सर्जन १, कन्सलटेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, २ र मेडिकल अधिकृत २५ जना मागेको थियो ।
त्यस्तै नर्सिङ अधिकृत ३, स्टाफनर्स ३० गरि ७६ जनाका लागि करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने जनाएको छ । योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले १५ दिन भित्र आवेदन गर्न भनिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस………….
३२ जना डाक्टर र ३३ जना नर्स सहित ७६ जनालाई कान्ति बाल अस्पतालमा रोजगारीको अवसर
राज्यको पुर्नसंरचना : खारेज होला त स्वास्थ्य मन्त्रालय ?